Dr Robinson Jean-Louis : “Mila fangaraharana ny Frankôfônia” | NewsMada
Dr Robinson Jean-Louis : “Mila fangaraharana ny Frankôfônia”
“Tokony hatao ny mangarahara ny amin’ny fanatanterahana io Frankôfônia io. Inona no maharatsy ny fahazoana vola any ivelany? Hazavao amin’ny vahoaka… “ Io ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Avana, ny Dr Robinson Jean-Louis, momba ny fampiantranoan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia eto Antananarivo, ny 22-27 novambra ho avy izao.
“Ohatrinona marina no entin’ny Malagasy amin’ny fanatanterahana an’io Frankôfônia io?” hoy izy. Ny Malagasy efa mahantrana indray ve no mbola hiantoka ny handraisana ireo olona avy any amin’ny firenena manankarena ireo?
Inona no maharatsy ny Frankôfônia raha ireo firenena mpikambana ao no hanamboatra ny lalana eto amintsika, ohatra, mba tsy handany ny volantsika? Fa raha isika indray no mikarakara, satria anjarantsika izany izao ny mikarakara ny Frankôfônia: isika indray no handany ny volam-bahoaka. Tsy mety izay zavatra izay.
Tsy misy ny fangaraharana amin’ny fitantanana eto amintsika. Afenimpenina ny raharaha, nefa toy ny aderadera hafahafa izany, araka ny nambarany.
Mandia fahasahiranana ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa hampiantranoana ny fihaonana an-tampony faha-XVI amin’ny Frankôfônia amin’izao fotoana izao: asa, hanao ahoana ihany?